Qaabachiisa Fuulaa Jijjiiruu(Dalgeessa ykn Dhaabbattaa) - LibreOffice Help
1 Fuulaawwan hundaaf qabachiisa fuulaa jijjiiruuf
2 Fuulaawwan muraasaf qabachiisa fuulaa jijjiiruuf
2.1 Haalootaalee dheerina fuula tokkoo
2.2 Hangii haalata fuulaa hujeekaan qinda'ee
Dhangii - Fuula fili.
Amma haalata fuulaa sirnaan hiikame maqaa "My Landscape" jedhuun qindeessite. Haalata haaraa fayyadamuuf, foddaa Haalatawwanii fi Dhangeessuu keessaa haalata fuula "My Landscape" lama cuqaasi. Fuulaawwan hundi kan amma bal'ina haalatawwan fuula jijjiirtee ta'a. Yoo "next style" haalata addaan hiikte, fulli jalqabaa bal'insa haalata haaraa kun qofti jijjirama.== Bal'insa haalatawwan fuulaa ==
Haalatni fuulaa kan hiikamu fuula tokko dabarsuuf qofa. Haalatni “Fuula Tokkoffaa” fakkeenya. Qabeenyawwan kana haalata fuula birootin "akkaataa itti aanu" hiikun qindeessi, kara gama birootin caancala fuula Dhangii - Fuula - Qindeessaairratti.
Qurxinsa fuulaa hujeekaa iddoo qareetti saaguuf, Ctrl+Enter dhiibi ykn Saagii - qurxinsa hujeekaa filiitii TOLEE cuqaasi.
Haalatni “Durtii” "akkaataa itti aanu" addaa cancala fuulaaDhangii - Fuula - Qindeessaa irratti hin qindeessu. Bakkasaa, "akkaataa itti aanu" akka “Durtii” qindaa'a. Haalataaleen fuulaa hundi kan haalata fuulaa wal fakkaatun hordofan fuuloota hedduu dabarsuu danda'u. Hammagni handaarrawwan gubbaa fi gadii haalata fuulaa "fuulli akkaataa waliin cita" tin qindeeffamu. Fuulootni hundi "fuulli akkaataa waliin cita" lama gidduu jiran haalata fuulaa wal fakkaatu fayyadamu.
Bakka qubannoo qareetti amala "page break with style" keewwata akka carraatti fayyadamuuf, Dhangii - Haalataalee fi Dhangeessuu filadhu. Sajoo haalataalee Keewwataa irra cuqaasi. Keewwata haalata isaa fooyyeessuuf barabaadduu irratti mirga-cuqaasiitii, Fooyyessi filadhu. Caancala Text Flow cuqaasi. Iddoo kutaawwanii keessatti, Dandeessisi fi Akkaataa Fuulaa Waliin kakaasi. Sanduuqa tarree irraa, maqaa akkaataa fuulaa tokko fili.
Retrieved from "https://help.libreoffice.org/index.php?title=4.1/Writer/Changing_Page_Orientation_Landscape_or_Portrait/om&oldid=703239"
This page was last edited 07:57:52, 2014-02-20 by LibreOffice Help user WikiSysop.